दोधाराका बाढी पिडितहरुलाई एक छाक टार्नकै पिडा (हेर्नुस् भिडियो) - आभाषकुन्ज
गृहपृष्ठ मुख्य समाचार दोधाराका बाढी पिडितहरुलाई एक छाक टार्नकै पिडा (हेर्नुस् भिडियो)
पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । धान रोपेको खेत बाढीले बगर बनाएको छ् । वर्ष दिनभरी खाने अन्न उब्जने खेतमा महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा आएको बाढीले बगर बनाएपछि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १० बैतिफाँटाका मोहन सुनार थापा निराश छन् । एक महिना अघि आएको महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा आएको बाढीले उनको सर्वस्व नास गऱ्यो । उनको आफ्नो र छिमेकीको खेत कता हो भन्ने समेत थाहा छैन् । खेतमा महाकाली नदीले बालुवाको ढिस्को थुपारिदिएपछि गहुँ लगाउन उनि बन्चित भएका छन् । ‘परिवार पाल्ने जती खेती हुन्थ्यो, अहिले बालुवा भरिएकोले खेती गर्न सकेका छैनौं’ स्थानियबासी मोहन सुनारले भने । यस पटक गहुँ छर्न नपाएपछि परिवार कसरी पाल्ने चिन्ता उनमा छ् । महाकाली नदीको धार खेत तर्फ सोझिएर बाढी पसेपछि मोहन सुनारलाई जमिन पुरानै अवस्थामा फर्काउने कसरी सोच्न सम्म सकेका छैनन् । एक महिना अघि महाकाली नदी र जगबुडा नदीको भंगालो बस्तीमा पसेपछि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. १० को कुतियाकवर, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, शान्ती टोल, अठार नम्वर पिल्लर लगाएत बस्ती बाढीले स्थानियको खेत बगर बनाएपछि यहाँका एक हजार बढी किसान समस्यामा परेका छन् ।
उनिहरुले निड्स नेपाल कञ्चनपुरले बितरण गरेको भौचर मार्फत बिउ, बिजन तथा कृषी सामग्री भौचर उपयोग गर्न मानेका छैनन् । ‘खेतनै बगर बनाएको छ, बिउ, बिजन, मलखाद लिएर हामी के गर्ने ?’ स्थानियबासी मनिसरा सुनारले भने– ‘निडस् नेपाल कञ्चनपुरले बाढी देखि हामीले धेरै सहयोग गरेको छ् । निड्स नेपाल प्रति हाम्रो गुनोसो छैन् । तर हाम्रो खेतनै छैन् हामीले बिउ, बिजन, मलखाद लिएर अर्थनै छैन् ।’ संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले बाढीपिडितको समस्या बुझ्नै नखोजेको उनिहरुको आरोप छ् । बिगतका दिनहरु देखि निड्स नेपाल कञ्चनपुर, राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लुए) लगाएत संस्था तथा ब्यक्तीहरु बाढीपिडितहरुलाई गर्दै आएको सहयोग अतुलनिय रहेको मनिसरा सुनारले बताएका छन् । तर सरकार पक्षले केही पनि नगरेको उनको गुनासो रहेको छ् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १० का झण्डै १ सय १५ घरधुरी स्थानियहरुको खेतमा बगर बनाएको एक आंकलन गरिएको छ् । कतै नदीले बालुवामय बनाएको छ भने कतै हिलाम्य खेत रहेको छ् । महाकाली नदीले स्थानिय किसान खड्क बुढा, धन बहादुर सुनार, गगन खत्री, ऐन बहादुर सुनार, तुल बहादुर सुनार, करे सुनार, मंगली देबि खत्री, जितु खत्री, लिला देबि खत्री, कले खत्री, लाल बहादुर खड्काको धान खेती नदीले कटान गरेको छ भने दर्जनौं स्थानिय किसानहरुको खेतीयोग्य जग्गा बगर बनाएपछि घरपरिवार कसरी पाल्ने चिन्ताले सताएको स्थानिय बाढीपिडितहरुको दुखेशो छ् ।
बाढीजन्य विनाशको बढोत्तरी जनप्रतिनिधीको ‘विकास गरेको देखाई भोट तान्ने मोह’ भएको स्थानियहरुको भनाई रहदै आएको छ् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निड्स नेपाल कञ्चनपुरले बाढी प्रभावितहरुलाई गहुँको बिउ, बिजन, मलखाद लगाएत कृषी सामग्री भौचर मार्फत उपलब्ध गराएको हो । तर बाढीपिडितहरुले खेतनै बगर भएपछि संस्थाले दिएको गहुँको बिउ, बिजन, मलखादको के काम भन्दै उक्त सामग्रीको साटो खाद्यान्न उपलब्ध गराईदिन निड्स नेपाल कञ्चनपुर तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिका कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।